Iran: Mas’uul kale oo uu ku dhacay cudurka Corona - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Iran: Mas’uul kale oo uu ku dhacay cudurka Corona
Gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Iran u qaabilsan siyaasadda dibedda iyo ammaanka qaranka ayaa noqday mas’uulkii saddexaad ee dalkaasi uu uga dhaco caabuqa dilaaga ah ee Corona.
“Baaritaanka la igu sameeyay ee Corona ayaa muujiyay inaan qabo cudurkaasi. Ma miro wax laga walwalo. Hadda goob karantiilan ayaa ku suganahay. Haddii Alle idmo shacabkeena wey ka guulaysan doonaan Corona,” ayuu yiri mas’uulkaasi oo lagu magacaabo Mojtaba Zolnour.
Waxaa Isniintii shaaciyay inuu cudurka qaaday wasiir kuxigeenka caafimaadka ee Iran, Iraj Harirchi iyo weliba xildhibaan kale.
Ugu yaraan 22 qof ayaa caabuqaasi ugu dhintay dalka Iran oo ay saaran tahay cunaqabateyn uu Maraykanka kusoo rogay.
Previous articleItoobiya oo dalbatay in la hakiyo wada-hadallada Nile
Next articleQodobada heshiiska Madaxtooyada Somaliland & Xisbiyada oo la soo bandhigay